Dagaal khasaare nafeed geystay oo laba beelood ku dhexmaraya deegaanno ka tirsan Gobolka Mudug | raascasayrmedia.com
← Booliska Kenya oo gacanta ku dhigay dad lagu sheegay Shabaab
Xarkada Alshabaab oo la wareegtay Degmada Dhuusa-Marreeb →
April 23, 2011 · 7:37 pm
Dagaal khasaare nafeed geystay oo laba beelood ku dhexmaraya deegaanno ka tirsan Gobolka Mudug
Ugu yaraan saddex qof oo dhinacyadii dagaalamay ah ayaa ku dhintay dagaal beeleed maanta ka qarxay deegaanno ka tirsan gobolka Mudug, waxaana ku dhaawacmay 11-qof oo kale.
Dagaalkan ayaa ka dhacay deegaan u dhexeeya Camaara iyo Bacaad-weyne oo ka tirsan gobolka Mudug, waxaana colaadda uu dagaalkan ka qarxay ay soo jirtay tan iyo sannadkii hore, iyadoo dagaalku uu weli ka socdo deegaankii uu maanta duhurkii ka billowday.
Goobjoogayaal ayaa sheegay in dagaalku uu qarxay markii mid ka mid ah beeluhu ay weerar qorsheysan ku qaaday deegaanka uu dagaalku ka socdo, waxaana burburay heshiisyo nabadeed oo labadan beelood horay loo dhexdhgay.
“Xaaladdu waa mid kacsan, waxaana dadkii ku noolaa deegaanka lagu dagaalamay iyo kuwa ku dhow ay bilaabeen inay qaxaan,” ayuu yiri goobjooge ku sugan tuulo ku dhow deegaanka uu dagaalku ka billowday oo warbaahinta la hadlay.
Dhaawacyadii ka dhashay dagaaladan ayaa la sheegay in loo kala qaaday degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyo degmada Cadaado ee gobolka Galguduud, mana jiraan iskudayo socda oo lagu doonayo in dagaalka lagu joojiyo.
Xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo waxgarad beelahan kasoo kala jeeda ayaa kulammo ay sannadkii hore ku yeesheen deegaannada ay dagaalladu ka socdaan ayaa waxay gaareen heshiisyo colaadda lagu joojinayo, inkastoo ay markii dambe burbureen.